Ahoana ny fomba fanaovana taratasy tsara tarehy ho an'ny afisy | Famoronana an-tserasera
Imbetsaka izahay no nahita afisy nanintona ny sainay, tsy noho ny hetsika nambaran’izy ireo ihany, fa noho ny karazana taratasy nisy azy. Ary nanontany tena ianao hoe inona no mety ho famantarana ho an'ny orinasanao raha nampihatra an'io endritsoratra io ianao. Fa, Ahoana no hanaovana taratasy tsara tarehy ho an'ny afisy?
Tsotra matetika ny valiny: mandehana amin'ny Internet ary mitadiava endritsoratra tsara tarehy. Saingy ny marina dia misy fomba maro hanaovana azy ireo, fa tsy maka tahaka azy avy amin'ny hafa. Te hahafantatra ianao hoe ahoana?
1 Ny fomba nentim-paharazana hadinontsika: ny tananay
2 Fomba hafa hanaovana litera tsara tarehy
2.1 Taratasy tsara tarehy ho an'ny afisy izay azonao alaina
2.2 Zoo abidy
2.3 Catch Feels
2.5 Bloom tsara tarehy
3 Soso-kevitra amin'ny fisafidianana litera tsara tarehy ho an'ny afisy
Ny fomba nentim-paharazana hadinontsika: ny tananay
Imbetsaka, rehefa tsy maintsy manao zavatra isika, dia mikaroka foana amin'ny Internet ny fomba iray izay manampy antsika hahazo izay tadiavintsika amin'ny fomba mora araka izay azo atao. Y adinontsika fa raha ny tenantsika no nanao izany dia tsy vitan'ny hoe mamorona zavatra miavaka, fa manana fitaovana ilaina mba hamoronana.
Noho izany, ny iray amin'ireo fomba voalohany amin'ny fanaovana taratasy tsara tarehy ho an'ny afisy dia ny fampiasana ny tanana sy ny lohantsika hieritreretana sy hanaovana ireo taratasy ireo. Ary ahoana no ahafahantsika manao izany? Eny, manana fomba maromaro izahay:
Lasa tena lamaody izy io ary zavakanto ampiasain'ny maro mba hialana sasatra (toy ny crochet, piozila na ny toy izany). Ny litera dia ny zavakanto amin'ny litera ary noho izany dia mampianatra anao ny fototra hamoronana litera tsara tarehy ho an'ny afisy na izay ilainao. Mahavariana ny vokatra, efa lazainay aminao.
Azonao atao ampiasao ny sasany amin'ireo môdely izay ao amin'ny Internet raha vao manomboka ianao ary tsy mahay miasa tsara na, raha efa manana hevitra ianao dia miezaha manamboatra ny endrikao manokana.
Ary koa, rehefa manao ny tononkira azonao atao ny mijery azy ireo amin'ny solosaina ary manova azy ireo ho endri-tsoratra hampiasaina (tsy mila manao izany rehetra izany amin'ny tanana isaky ny te hampiasa an'io endritsoratra io ianao).
Ary ny tsara indrindra dia ny hoe, satria zavatra noforoninao izy io, dia tsy hisy olona hitovy aminy, ary raha misy zavatra mivoaka dia aorian'ny anao. Miaraka amin'ny originality sy ny fiantraikany anananao.
Azontsika lazaina izany Ny calligraphie no fototry ny zava-drehetra satria ny soratra mihitsy no anisan'izany. Tsy dia zava-baovao loatra anefa izy io, satria mifototra amin’ny abidy nampiasaina tamin’ny andro hafa (grika, romana...) ny endriny, izay midika hoe “maka tahaka” ny zavatra efa misy.
Ho takalon'izany dia mahazo a endri-tsoratra izay mampiseho fa vita tanana izy io ary miavaka. Satria tsy misy litera roa mitovy.
Eto dia tsy manao sary amin'ny teny loatra, fa ny teny mihitsy no lasa kanto.
Fomba hafa hanaovana litera tsara tarehy
Ho fanampin'ny famoronana azy ireo amin'ny tanana, ny fomba hafa tsy maintsy ataonao amin'ny famoronana litera mahafinaritra dia amin'ny Internet, izany hoe amin'ny Internet.
afaka mahita sasany ianao pejin-tranonkala izay hamoronany endritsoratra tany am-boalohany amin'ny alàlan'ny hafa na azonao atao ny manamboatra azy ireo amin'ny famoronana ny endrikao manokana.
Ohatra, manana ianao:
Taratasy sy endritsoratra.
Taratasy tsara tarehy.
Mpanova litera mahafinaritra.
Samy miasa amin'ny fomba hafa ny tsirairay, saingy azonao atao ny manandrana mijery raha mety amin'ny afisy ny valiny.
Taratasy tsara tarehy ho an'ny afisy izay azonao alaina
Araka ny fantatray fa tsy manam-potoana (na fahaiza-manao) foana ianao amin'ny fanaovana taratasy tsara tarehy ho an'ny drafitrao, dia nanangona ny sasany amin'ireo tena tany am-boalohany hitanay izahay ary azo ampiasaina amin'ny afisy (arakaraka ny hoe ho an'ny mpihaino iray na hafa).
Tena tianay ity loharano ity satria ny litera tsirairay dia biby izay apetraka amin'ny endrika litera. Noho izany dia manana fampiasana roa ianao: amin'ny lafiny iray, azo vakiana (avy lavitra dia mamaky tsara kokoa); ary, etsy ankilany, dia toy ny sary ho azy.
Afaka mahita izany ianao eto.
Ny iray hafa izay tena tianay dia ity iray ity mamela anao hampiasa litera lehibe sy kely, loko ary mifanandrify amin'ny litera ho an'ny vokatra samihafa. Na dia atolotra ho an'ny ankizy aza izy io dia azo ampiasaina amin'ny orinasa mifandraika amin'ny ankizy, fivarotana boky, fivarotana vatomamy, sns.
Anananao izany eto.
Izany dia tonga lafatra amin'ny lohateny na teny na andian-teny fohy (lohahevitra). satria raha araraotinao dia ho sahirana loatra ny afisy.
Manana fomba fianarana tranainy izy io saingy maoderina, ka mety ho zavatra azo ampiasaina.
Bloom tsara tarehy
Ity no iray amin'ireo mitovitovy kokoa amin'ny litera sy izay azonao ampitaina toy izany. Tianay indrindra noho izany hatsaran-tarehy izany fa, rehefa, satria araka ny hitanao dia mitambatra ny litera rehetra ary mety hanasarotra ny famakiana izany raha be loatra ny lahatsoratra.
Amin'ity tranga ity, ary koa loharano iray izay mody soratana tanana, dia manana tombony ihany koa amin'ny sary voninkazo. Mety ho tonga lafatra ho an'ny afisy izay mitady ny fahatsapana ho noforonina tsy misy solosaina na endri-tsoratra, fa ao ambadiky ny sehatra dia fantatsika fa tsy izany no izy.
Soso-kevitra amin'ny fisafidianana litera tsara tarehy ho an'ny afisy
Ankehitriny rehefa nilaza taminao ny fomba fanaovana taratasy tsara tarehy ho an'ny afisy izahay, dia tsy maintsy manome fampitandremana ho anao izahay. Ary izany dia tsara tarehy toy ny mivoaka, raha rehefa manantona an'io afisy io ianao dia tsy afaka mamaky izay voalaza ao amin'ny lahatsoratra, na tsy maintsy mijanona ela loatra izy ireo mba "hahatakatra izany", dia mety ho nanao fahadisoana lehibe ianao.
Ny tanjon'ny afisy dia ny hisarihana ny saina, eny. Fa mba hahafahana mitatitra zavatra ao anatiny ihany koa, na hetsika, endrika, fotoana, sns. Raha tsy azonao izany dia na tsara tarehy toy inona aza dia horaisin'ny olona ho "sary" fotsiny.
Noho izany, rehefa manao taratasy ho an'ny afisy, dia tadidio ireto manaraka ireto:
Indraindray ny tsotra no tsara indrindra. Amin'izany fomba izany dia azonao antoka fa tonga any amin'ireo mahita ny afisy ny hafatrao.
Milalao loko, fa tsy ny litera ihany, fa ny sary koa. Izany no fomba fampifandanjana ny sary amin'izay tianao hambara.
Tandremo tsara ny toerana hametrahana ny afisy. Ny famantarana mihantona eo amin'ny varavarana na eo amin'ny varavarankelin'ny fivarotana dia tsy mitovy amin'ny iray izay ho anisan'ny takelaka dokam-barotra. Izany rehetra izany dia hisy fiantraikany amin'ny karazana endri-tsoratra hofidiana satria mety ho sarotra kokoa ny mahazo azy, raha lavitra kokoa.
Izany rehetra izany, efa noeritreretinao ve ny fomba fanaovana litera tsara tarehy ho an'ny afisy izay tany am-boalohany, mamorona ary mahafeno ny filan'ny typografika mba hijery tsara?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ahoana ny fomba fanaovana taratasy tsara tarehy ho an'ny afisy
Fandaharana hanovana sary ho sary
Tantaran'ny logo Disney